प्राइम बैंकको साढे ३ अर्बको ऋणपत्र फागुन १९ देखि बिक्रीमा आउने, कति पाइन्छ ब्याज ? | Notebazar
प्राइम बैंकको साढे ३ अर्बको ऋणपत्र फागुन १९ देखि बिक्रीमा आउने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाडौ । ११फाल्गुन, २०७७, मंगलवार / Feb 23, 2021 08:08:am
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले फागुन १९ गतेदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ ।
बैंकले दीर्घकालीन स्रोत परिचालनका लागि ऋणपत्र निष्काशन गर्न लगोको हो । बैंकले ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेगरी ८ वर्ष अवधिको प्राइम डिबेन्चर २०८५ जारी गरेको हो ।
बैंकले जारी गर्ने ३५ लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात १४ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र ६० प्रतिशत अर्थात २१ लाख कित्ता व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न संघ संस्थालाई बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएकोमा ५ प्रतिशत अर्थात ७० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषको हिस्सा रहनेछ ।
बैंकको ऋणपत्रमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ ।
लगानीकर्ताले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ५ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । फागुन १९ गते बुधबारबाट निष्कासन गरिने उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा फागुन २३ गतेसम्म र ढिलोमा चैत्र ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
प्राइम बैंकको ऋणपत्र निष्काशन मिति पछाडि सर्यो, फागुन २८ गतेदेखि मात्र निष्काशन हुने4days ago
प्राइम बैंकद्धारा कन्या गुरुकुलमको भवन निर्माणका लागि ४ लाख सहयोग 25/02/2021
प्राइम कमर्सियल बैंकको बोनसपछि शेयरमूल्य समायोजन 04/01/2021
प्राइम कमर्सियल बैंकको बोनस आइतबारसम्म कायम शेयरधनीलाई मात्रै 03/01/2021
नेरुडे लघुवित्तको करिब ५३ हजार कित्ता संस्थापक शेयरको लिलामी खुल्यो 31/12/2020
नेरुडे लघुवित्तको ५२ हजार बढी संस्थापक शेयर बिक्रीमा 25/12/2020
प्राइम बैंकको लाभांश पाउन पुस १९ गतेसम्म शेयरधनी कायम हुनुपर्ने 23/12/2020
प्राइम कमर्सियल बैंकको लाभांश प्रस्ताव 21/12/2020